NOHO NY FITIAVAN-TSEZA : MIFAMPITANTANA NY TIM SY MAPAR -
AccueilSongandinaNOHO NY FITIAVAN-TSEZA : MIFAMPITANTANA NY TIM SY MAPAR
NOHO NY FITIAVAN-TSEZA : MIFAMPITANTANA NY TIM SY MAPAR
07/04/2018 admintriatra Songandina 0
Tsy takona hafena intsony fa efa haseho vahoaka mihitsy ny fikasana ahazo fahefana amin’ny fomba moramora ho an’ny Ravalomanana sy Rajoelina. Noho io fitiavantseza tafahoana io dia tsy manao manakorontana ny firenena ny olon’ireto mpanao politika efa maika ny hitsetsitra ny vahoaka Malagasy ireto. Ezahina hakorontana avokoa araka izany ireo fanomanana ny fifidianana izay efa nanomezan’ny filoham-pirenena toky fa hotanterahina amin’ity taona ity. Hita taratra izany fanakorontanana izany nandritra ireo fivoriana tsy ara-p otoana natrehan’ireo parlemanta nandaniana ireo volavolan-dalàm-pifidianana. Nisavoritaka tanteraka tokoa teny anivon’ny antenimieram-pirenena nandritra ireny ifvoriana ireny, ary na dia ireo mpiasan’ity andrim-panjakana ity aza dia vitan’ireo solombavambahoaka mpanohitra ny nikasi-tanana azy. Na dia efa lany aza anefa ireo volavolan-dalana ireo dia mbola mahita fihetsika hafa hanakorontanana indray ireo parlemantera mpanohitra.
Mazava fa ny tsy ahatanteraka ny fifidianana mihitsy no tanjon’ny mpitarika ny TIM sy ny MAPAR matoa manao ny fomba rehetra hanakorontanana izany ny olon’izy ireo. Fihetsika tokony tsy mahagaga raha tarafina amin’ny tanjak’ireto antoko politika roa ireto ho ny mpanao poltika sasany. Tsy tokony ho hadinoina mantsy fan oho ny fahotana mahafaty vitany teto amin’ny firenena dia efa tsy misy mpanaraka intsony ny filoha teo aloha Ravalomanana Marc amin’izao hankatoky ny fanatanterahina ny fifidianana izao. Tsy mahagaga ihany koa raha toa ka manao ny fomba rehetra tsy hirosona amin’ny fifidianana ny I Andry Rajoelina satria fifidianana ben’ny tanàna no natrehany nialohan’ny nitantanany ny firenena taorian’ny nanonganany an’ Dravalomanana. Tahotra ny hiatreana fifidianana filoham-pirenena noho izany no mahatonga azy mamboly korontana etsy sy eroa amin’izao fotoana izao. Amin’izay fotoana izay dia miroso amin’ny tetezamita vaovao ny firenena ahafahany mipetraka eo amin’ny moramora eo amin’ny toerana raha ny heviny. Noho ny fitiavana seza tafahoatra araka izany dia voatery miaraka ny nanogam-panjakana sy ny voahongana.
Ceni : Manilika andraikitra
Toekaren’i Madagasikara:MANOMBOKA MIARINA